Kedu ihe bụ Robotic Process Automation? | Martech Zone
Otu n’ime ndị ahịa mụ na ha na-arụ ọrụ ekpughela m otu ụlọ ọrụ na-adọrọ mmasị nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere ike ghara ịma na adị. N'ime omumu ihe mgbanwe ha nyere site na DXC. Teknụzụ, Futurum kwuru, sị:
RPA (robotic usoro akpaaka) nwere ike ọ gaghị abụ na isi nke mgbasa ozi mgbasa ozi dịka ọ dị na mbụ mana teknụzụ a ejirila nwayọ ma rụọ ọrụ nke ọma na teknụzụ na ngalaba IT dịka ngalaba azụmaahịa na-ele anya na-arụ ọrụ a na-emegharị ugboro ugboro, na-ebelata ụgwọ, na-abawanye ziri ezi na nyocha, ma chegharia talent nke mmadu na oru di elu.
Ebe ọrụ na Mgbanwe Dijitalụ
Isi ihe 9 Na-emetụta Ọdịnihu nke Ọrụ
Na isi ya, Robotic Usoro akpaaka (RPA) bụ sọftụwia nke jikọrọ ngwanrọ iji mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Dịka anyị niile matara, nchịkọta teknụzụ nke ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-abawanye ma nwee ọtụtụ usoro na usoro, usoro na usoro nke ndị ọzọ.
Ndị ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike ijikọ nyiwe, na-enweghị ike ịnwe ọganihu na-aga n'ihu. RPA software na-ejuputa ọdịiche ahụ dị mkpa. RPA software na-abụkarị koodu dị ala ma ọ bụ ọbụna nyiwe na-enweghị koodu nke na-enye interface njirimara dị mfe iji wuo ihu njirimara ndị ọrụ ma ọ bụ usoro ịmalite. Yabụ, ọ bụrụ na ERP gị bụ SAP, ahịa azụmaahịa gị bụ Salesforce, ego gị nọ na Oracle, ma ị nwere usoro iri na abụọ ndị ọzọ… enwere ike itinye ngwa RPA ngwa ngwa iji jikọta ha niile.
Lelee nke gi Usoro ahịa na ire ahịa. Ndị ọrụ gị ọ na-abanye ozi ugboro ugboro gafere ọtụtụ ihuenyo ma ọ bụ sistemụ? Ndị ọrụ gị ọ na - emegharị data na - aga n’usoro sistemụ gaa na nke ọzọ? Ọtụtụ ụlọ ọrụ dị… ma nke a bụ ebe RPA nwere nnukwu nlọghachi na ntinye ego.
Site na imeziwanye njirimara ndị ọrụ na ibelata nsogbu ntinye data, ndị ọrụ na-adị mfe ịzụ, enweghị nkụda mmụọ, mmezu ndị ahịa ziri ezi, enwere mbelata nsogbu ndị dị ala, yana ịbawanyewanye uru. Site na mmelite ọnụahịa oge gafere sistemụ, ụlọ ọrụ ecommerce na-ahụkwa mmụba dị egwu na ego ha nwetara.
E nwere usoro etiti enwere ike gbanwee na RPA:
gara - usoro a na - aza mmekorita ya na onye ọrụ. Iji maa atụ, Clear Software nwere onye ahịa nwere ihu 23 na ERP ha na ha nwere ike ịdaba na otu njirimara ọrụ. Nke a belata oge ọzụzụ, melite nchịkọta data, ma belata ọnụ ọgụgụ nke njehie (ịghara ịkọwa nkụda mmụọ) nke ndị ọrụ mgbe ị na-abanye ozi.
Na-elezighị anya - sistemụ na - ebute mmelite nke na - ekwukwa ọtụtụ sistemụ. Otu ihe atụ nwere ike ịgbakwunye onye ahịa ọhụrụ. Kama ịgbakwunye ihe ndekọ ahụ na usoro ego ha, ecommerce, mmezu, na ahịa and RPA na-ewe ma na-ehicha ma gbanwee data dịka ọ dị mkpa ma na-emelite sistemụ niile na-akpaghị aka n'oge.
Ndị nwere ọgụgụ isi - RPA, dị ka ọ bụla na teknụzụ ọ bụla, ugbu a na - etinye ọgụgụ isi iji nyochaa ma na - etinye bots na - akpaghị aka iji bulie usoro niile na nzukọ.
Systemsfọdụ sistemụ ụlọ akwụkwọ ochie nke RPA na-adabere na nseta ihuenyo na iji aka rụpụta. Sistemụ ọhụrụ RPA jiri ngwaahịa etinyere na njikọta nke API ka mgbanwe ndị dị na ihu ọrụ ghara imebi njikọta.
Ntinye RPA nwere nsogbu. Onye ahịa m, Clear Software, edeela nkọwa dị ịrịba ama nke RPA na otu esi egbochi ọnyà nke mmejuputa RPA.
Download Azọ Ka Mma Iji RPA
Tags: APIakpaakadoro anya softwareCRMOgbeọdịnihumwekotajon gilmanOracleiji were egootcrobotic usoro akpaakarpandị ahịasapahụmahụ onye ọrụonye ọrụ interface